Shacabka DDS Oo Mudaharaadyo Waaweyn Ku Taageeray Dhibbaneyaasha Gobolka Sitti, Farriinna U Diray Qawleysatada TPLF - Jigjiga Online
HomeSomalidaShacabka DDS Oo Mudaharaadyo Waaweyn Ku Taageeray Dhibbaneyaasha Gobolka Sitti, Farriinna U Diray Qawleysatada TPLF
DAAWO Sawirradii iyo Qoraalladii Mudaharaadeyaashu Soo bandhigeen
Jigjiga (JigjigaOnline) – Magaalooyinka waaweyn iyo tuulooyinka Dawladda Deegaanka Soomaalida, ayaa waxa maanta laga sameeyey isku-soo baxyo waaweyn oo lagu taageerayo shacabka galbeedka Gobolka Sitti ee ay weerarrada ba’an ku hayaan ciidamada Liyuu Booliska Canfarta iyo Maleeshiyooyin hubaysan, kuwaas oo dad badan oo Soomali ku xasuuqay halkaas.
Waddooyinka magaalada Jigjiga ayaa waxa saaka soo buuxiyey kumannaan qof oo sittay tabbeeleyaal/boodhadh ay ku xardhan yihiin sida ay u garab taagan yihiin shacabka Sitti, waxaanay muujiyeen sida ay uga xun yihiin wararka been abuurka ah ee warbaahinta Canfartu ka baahinayso duullaankooda ay ku hayaan shacabka aan hubaysnayn.
Magaalooyinka kale ee Qabri-Bayax, Godey, Wardheer, Qabri Daharre iyo guud ahaan deegaanka ayaa sidaas oo kale bannaanbaxyo uga dhaceen.
Mudaharaadeyaasha ayaa waxay ku dhawaaqayeen ereyo ay dareenkooda ku cabbirayeen, isla markaana ay ku caddaynayaan in ay garab taagan yihiin dhibbaneyaasha reer Sitti.
Qoraallada oo iskugu jiray luuqadaha Soomaaliga iyo Axmaariga, ayaa waxa farriimihii ku qornaa ka mid ahaa: “Waxaan kasoo hor jeednaa xasuuqa sida ulakaca ah uu maamulka Canfartu ugu geystay shacabka Gobolka Sitti.”
Qaar ka mid ah mudaharaadeyaasha ayaa waxay iyaguna ka hadleen sababta ay isku-soobaxa u sameeyeen, ka mid ereyadoodii: “Waxaanu ka dhiidhinay dadkayaga lagu gumaadayo xuduudda Canfarta iyo Soomaalidu wada deggan tahay.”
“Saaka waxaanu iskugu soo baxnay magaalada, waxaananu ka xunnahay dadkayaga la xasuuqayo. Dadka siyaasad ayaa lagu xasuuqay, waxaanay ka mid ah carruur iyo hooyooyin. Waanu garab taaganahay shacanka Sitti, Soomaaliduna waa isku mid.”
Intii uu mudaharaadku socday, waxa kale oo ay dadku ku qaylinayeen ereyo ka dhan ah qawleysatada TPLF oo ay ku eedeeyeen inuu dabada ka riixayo weerarrada Canfarta, iyagoo ka raadsanaya marinno ay ganacsiyo sharci-darro ah kasoo geliyaan dalka iyo qas ay ku khalkhalinayaan isbeddelka dalka ka dhacay.
Trump: Erdogan “ha is adkeynin, nacasna ha iska dhigin”